अष्ट्रेलिया र नेपालको समेत यो निराशाजनक अवस्थामा केही उल्लास भर्ने प्रयास गरेका हौँ: गान्धी भट्टराई - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:२५ |
मेलबर्न। अष्ट्रेलियामा अनलाइन तीज नृत्य प्रतियोगिता हुनेभएको छ। गुल्मी समाज भिक्टोरीया र नेपअस क्रियुको संयुक्त आयोजना तथा एक्स्पर्ट एजुकेशनको मूख्य प्रायोजनमा अनलाइन तीज नृत्य प्रतियोगिता हुनेभएको हो।यसै कार्यक्रमको सम्बन्धमा आयोजक संस्था मध्येको एक गुल्मी समाज भिक्टोरियाका अध्यक्ष गान्धी प्रसाद भट्टराईसंग गरिएको कुराकानी :
अनलाइन तीज नृत्य प्रतियोगिताको अवधारणा कसरी जन्मियो ?
गुल्मी समाज भिक्टोरियाले विगत केही वर्ष देखि निरन्तर रुपमा तीज विशेष कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ। विगतका वर्षहरुमा हामी राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरुलाई निम्त्याएर लाइभ प्रस्तुतिहरु सहित कार्यक्रम गर्ने गर्थ्यौं। तर कोरोना भाइरसका कारण यो वर्ष त्यस ढांचाको कार्यक्रम गर्न असमर्थ हुने भयौं। तीज विशेष कार्यक्रम भनेको केवल मनोरन्जन मात्र नभएर नेपाली कला संस्कृतिको सम्बर्द्धन तथा प्रबर्द्धन संगै समाजमा सकारात्मक उत्साहको सिर्जना गर्नु पनि हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले यसलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिएला भन्ने विषयमा नेपअसका भाइबहिनीहरुसंगको छलफल पछि हामी अनलाइन कार्यक्रम आयोजना गर्ने टुंगोमा पुगेका हौँ। नेपअस क्रियुअष्ट्रेलियामा रहेर नृत्यकलामा नै निरन्तर लागिरहेको हुनाले पनि हामीलाई यस्तो ढांचाको कार्यक्रम आयोजना गर्न सहज भयो भन्ने मलाई लाग्छ।
कार्यक्रमको मूख्य उद्देश्य प्रष्ट पारिदिनुहोस् न !
कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा हामीमा एक किसिमको निराशा छाएको छ। अहिलेको कार्यक्रमको मूख्य उद्देश्य भनेको यो निराशाजनक समयमा केही उत्साह, खुशी र आशा भरौं भन्ने हो। अर्को कुरा, प्रतिभावान युवाहरुलाई सानो भएपनि एउटा प्लेटफर्म प्रदान गरौँ जसले गर्दा उनीहरुका लागि ठूलो प्लेटफर्म सम्म पुग्ने बाटो बनोस भन्ने हो। त्यसपछि नेपाली कला तथा संस्कृतिको सम्बर्द्धन तथा प्रबर्द्धन त छँदै छ।
अनलाइन नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि प्रक्रिया के हो ?
प्रतियोगितामा भाग लिन चाहनेहरुले अगस्ट १९ सम्ममा [email protected] मा आफ्नो नाम, ठेगाना, देश र उमेर उल्लेख गरि आफ्नो एकल नृत्य प्रस्तुति रहेको भिडियो पठाउनु पर्नेछ। भिडियोमा नेपाली पहिरन लगाएको हुनुपर्नेछ र सुरुमा बढीमा बीस देखि तीस सेकेन्डको आफ्नो परिचय दिनुपर्नेछ। प्रतियोगी तेह्र वर्ष माथि उमेरको हुनुपर्नेछ।
प्रतियोगीको मूल्यांकन कुन आधारमा गरिनेछ ?
मूल्यांकन गर्दा निर्णायक मण्डलले प्रतियोगीको पहिरन, परिचय शैली, नृत्य प्रस्तुति, हाउभाउको आधारमा गर्नुहुनेछ।
मूल्यांकनका चरणहरु छन् कि ?
सबै प्रतियोगीहरुबाट निर्णायक मण्डलले उत्कृष्ट १० जना छनोट गर्नुहुनेछ। त्यसपछि ती उत्कृष्ट १० प्रतियोगिका भिडियोहरु सामाजिक संजालमा अगस्ट २० तारिख अर्थात हरितालिका तीजको दिनमा राखिनेछ। ती भिडियोलाई कतिले मन पराउनुहुन्छ अर्थात लाइक, कमेन्ट, सेयर कति हुन्छ त्यसलाई मूल्यांकनमा जोडिनेछ। सामाजिक संजालकै प्रतिक्रिया अन्तिम निर्णय भने होइन। यसमा निर्णायक मण्डलको ७० र सामाजिक संजालको ३० गरि पूर्णांक १०० हुनेछ। निर्णायक मण्डलको मूल्यांकन र सामाजिक संजालको प्रतिक्रिया जोडेर आएको नतिजा अगस्ट २२ तारिख अर्थात ऋषि पंचमीको दिनमा सार्वजनिक गरिनेछ। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने प्रतियोगितालाई क्रमश ७५०, ५०० र २५० डलर पुरस्कार राशी रहेको छ।
नतिजा निष्पक्ष रहनेछ भन्नेमा प्रतियोगी कत्तिको ढुक्क रहन सक्लान् ?
शंकै छैन। ढुक्क हुनुस्। राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त कलाकारहरु बम बहादुर कार्की, मन्जु पौडेल र नेपअस क्रियुको नृत्य गुरु अनि भरत नाट्यममा लोकप्रिय व्यक्तित्व निर्णायक मण्डलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरु सबै आफ्नो ठाउँमा अब्बल र कलालाई राम्रोसंग बुझेको व्यक्तिहरु हुनाले दायाँबायाँ हुने सम्भावना नै छैन।
कार्यक्रमको बारेमा कस्तो प्रतिक्रियाहरु पाइरहनुभएको छ ?
अत्यन्तै उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डबाट प्रतियोगितामा सहभागी हुन सकिने भन्ने योजनालाई सबैको आग्रह अनुरुप बढाएर नेपालभरबाट पनि सहभागी हुन सकिने बनायौं। त्यस्तै, अगस्ट १५ तारिख सम्म भिडियो पठाउन सकिने कार्यक्रमको योजनालाई बढाएर अगस्ट १९ सम्म पठाउन सकिने भन्ने निर्णय गर्यौं। सहभागिता जनाउन चाहनेबाट मात्र नभएर सिंगो समुदायबाट नै यो निराशानक समयमा यसरि कार्यक्रम गर्ने आँट गर्नु र यसरी खुशी बाँड्न सक्नु अति राम्रो कार्य रहेको भन्दै हौसला पाइरहेका छौं। त्यस्तै, यस कार्यक्रममा राखिएको पुरस्कार राशीले प्रतियोगीको मेहनत तथा कलाको सही सम्मान हुने प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्।
अन्त्यमा, कार्यक्रमको बारेमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
नेपालबाट टाढा रहेतापनि मन नेपालमै छ। नेपालीहरुमा सानो खुशी बाँड्न सकौं भनेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। हामीलाई विश्वास गरेर साथ दिने एक्स्पर्ट एजुकेशन लगायत सम्पूर्ण प्रायोजक संस्थाहरुप्रति हामी कृतज्ञ छौं। यो अवसरलाई इन्टरनेटको पहुँच भएका युवाहरुले सदुपयोग गरि भाग लिनुहुनेछ र दर्शकले पनि सोही रुपमा साथ दिनुहुनेछ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु।
Previousअष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया सरकारद्वारा कोरोना परिक्षणमा दिइने सहयोग ४५० डलर बनाउने निर्णय
Nextब्राजिलबाट आयात भएको कुखुराको मासुमा कोरोना भाइरस भएको चिनियाँ अधिकारीको दाबि
श्रमकालागि जाने नेपालीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अनिवार्य
९ असार २०७६, सोमबार ०३:२०
१५ श्रावण २०७५, मंगलवार ११:३८
अँग्रेजी नयाँ वर्षका दिन दीपावली गर्न सरकारको निर्देशन
१४ पुष २०७६, सोमबार १२:२१
१६ मंसिर २०७६, सोमबार ०२:३२